Isbedelka Cimilada Adduunka | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Waxaa inta badan dadyawga dunida ku nool hadal hayaan isbedelka cimilada, isbedelka cimilada waxaa sababay wax yaalo badan oo bini aadamku kawkayahay. Bini’aadamku waxaa uu dhalan rog ku sameeyay deegaankii, isagoo sababay waxyaalo badan oo deegaanka asiibay.
Waxaana sababey qodobadaan soo socda:
Warshadaha: Waxay sameeyeen warshado kuwaas oo soosaara qiiq fara badan waxayna ku daraan hawada. Markii qiiqa ay warshaduhu ay soo saaraan ay ku siidaayaan hawada waxay sitoos ah ula falgalaan neefihii ama gaasaskii sida dabiiciga ahaa ee hawada ugu jiray. Waxay u horseedaa in ay gaaskii hawada ku jiray uu ka bato atmoosfeerkii, kadibna uu sababo in ay cimiladu kululaato. Haddii cimiladu kululaatana waxaa dhacaya isbedelka cimilada.
Gaadiidka: Gaadiidku waxa uu ka qayb qaataa in uu wasakheeyo hawada. Waxayna keenaan in ay atmoosfeerku uu noqdo mid sumaysan. Waayo baabuurtu waxay soo saartaa kaarboon hal ogsaydh iyo salfar laba ogsaydh, taas oo si toos ah hawada ugasha. Waxayna sababtaa in ay hawadii xumaato, waxaana yimaada in cimiladu noqoto mid diirimaad ah. Waxayna sababtaa isbedelka cimiladda adduunka.
Xaalufka: Dhirta la jaraayo maalin iyo habeen, waxa ay keentaa in uu dhaco xaaluf ba’an oo sababa in ay dhacdo wax yaalahaan soo socda:
B) Roob la’aan.
Kulayl iyo qabow.
Abaaro joogta ah.
Carro guur ama nabaad guur. G)Hoy iyo har la’aan.
T) Hu’ iyo gabaad la’aan.
Nafaqo yari iyo caafimaad la’aan.
Beeraha: Waxa ay sababaan beeralaydu in ay xaalufiyaan kaymo iyo meelo ay ahayd. Waxayna ka dhameeyaan dhir hoosaadkii iyo dhirtii dhaadheerayd, iyagoo dhirta ka jaraya. Dhirta la jarana waxay keentaa in uu dhaco isbeddelka hawada. Sababtoo ah dhirtu waxay qaadataa kaarboon laba ogsaydh. Haddii ay hawadu wasakhawdo oo uu kabato kaarboon laba ogsaydhka, waxaa dhacaya in ay hawadii ay kululaato, sababtana ay tahay in dhirtii qaadan jirtay kaarboon laba ogaydhka la xaalufiyay.
Saamaynta isbedelka cimilada adduunka
Saamaynta isbedelka cimilada adduunka ma ahan mid halkaan lagu sookoobi karo. Balse waxaan isku dayayaa in aan idin sookoobo si aad u heshaan warbixin muujinaysa sida adduunka isugu xiran yahay iyo sida uu isku saameeyo. Waxaan sooqaadanaynaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin:
J) Jooga badda: Isbedelka cimiladu waxay saamayn weyn ugaystaan in ay hawadu diiranaanto. Taas waxa ay keentay in ay dhalaalaan cirifyada halkaas oo ahaa barafyo, markii ay hawadu diiranaanto waxaa dhalaala barafyada cirifyada. Waxayna keentaa in barafkii dhalaalay ay ku darsamaan baddihii, taas oo keentay in heerkii badda kor ukaco. Waxayna sababtaa in meelihii xeebta ahayd ee la dagi jiray inay isku bedesho bad. Waxaan meesha kabaxayaa noolihii ku noolaa halkaa.
Balliyada iyo webiyada: Sidii aan ku sooxusnay qodobkii kowaad ayay isku saamayn yihiin. Waayo markii hawadu dunidu kululaato waxa ay keentay in barafkii dhalaalay in uu ku darsamo webiyadii iyo balliyadii. Waxayna keentaa in uu dhaco fatahaado.
Abaaraha: Abaaraha ka dhacaya soomaaliya kuna soobadanaya dalka, waxaa sabab u ah bini’aadamka. Waayo haddii ay isbedesho cimiladu waxa ay keentaa in ay dhacaan duufaano, abaaro, fatahaado iwm. Waxaad ogtahay in
Soomaaliya ay ka dhacdo abaaro daba dheeraaday, kaas oo aan horay uga dhici jirin dalkeena.
X) Isbedelka hawada: Dhaq dhaqaaqa bini’aadamka waxa ay keentaa in ay isbedesho atmosfeerka. Tusaale, wadanka china waxa uu ka midyahay wadamada ugu warshadaha badan. Waxayna keentay in warshadaha dalka kubadanaya in ay keento in hawadu dikhowdo, waxayna horseeday in uu dhaco isbedelka cimilada. Haddii aad ufiirsato wadanka china hawadiisa waxa ay u muuqataa cadaan, waxaana dhalinta loogu sheekeeyaa in hawada china ay qarnigii la soodhaafay uu ahaa buluug.
KH) Kala duwanaanshaha nolosha: Waxa ay keentaa isbedelka cimilada in uu dhaco kala duwanaansho noolaha ah. Waxaana barabaxa noolayaal badan kaas oo kacararaya isbeddelka hawada, kulayl ama qabow, midkaas oo uusan horay uga jirin dalka.
Tags: Isbedelka Cimilada Adduunka
Next post Sida Looga Hortagi Karo Isbeddelka Cimilada Adduunka
Previous post Roobka iyo Xiliyada Soomaaliya